Matoor koronto oo 220V ah oo ku jira guriga & sahayda beerta ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika
Matoor koronto oo 220V ah oo ku jira guriga & sahayda beerta ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika.
Hal-abuurka hadda wuxuu la xiriiraa 220v matoorka koronto ee qalabka kuleylinta guriga kaas oo si gaar ah loogu fikiray inuu yahay kuleyliyaha loogu isticmaalo baabuurta. Waxyaalaha kuleyliyaha oo badan, kuwaas oo la is dulsaaray si loo qeexo block kuleyl, waxay la sameeyaan qalab kontorool unug dhismeed. Ujeedadaas awgeed, qalabka xakamaynta waxaa lagu dhejiyaa bar dambe ee qaabka iyada oo la adeegsanayo walxaha kuleyliyaha ah. Hawada lagu kululeeyo waxay dhex maraa block kuleyliyaha iyo sidoo kale daaqadaha lagu bixiyo bar lateral, curiyeyaasha qaboojinta ee la soo dhaafay kuwaas oo sida ay u kala horreeyaan ku xiran qaybaha korontada-electronics ee qalabka gacanta.
Shaqadan, naqshadeeyaha cillad-u-dulqaadka dareemayaasha (FTA) ee kicinta 220v matoorka korantada ee wadista guriga ee loo isticmaalo baabuurta korantada (EV) ayaa lagu soo bandhigay. Bangi kormeerayaal ah ayaa loo qaabeeyey iyadoo lagu salaynayo matalaada moodeelka matoorka induction ee meelo tixraaceed oo kala duwan. Cilladda ogaanshaha waxaa lagu sameeyaa iyadoo la farsameynayo hadhaaga haraaga ah ee laga helay bangiga kormeerayaasha. Habka ogaanshaha ayaa awood u leh inuu kala saaro khaladaadka hal iyo kuwa badan iyo sidoo kale inuu aqoonsado dareemayaasha khaldan. Intaa waxaa dheer, dareemayaasha farsamada ayaa loo isticmaalaa dib-u-habaynta jawaab-celinta xakamaynta si loo helo hawlgal joogto ah oo ah istaraatiijiyadda xakamaynta vector ka dib cilladda dareenka. Natiijooyinka jilitaanka ee EV oo leh FTA-da la soo jeediyay waxay ansixisay waxtarka soo jeedinta iyo adkeysigeeda ka dhanka ah kala duwanaanshaha cabbirka. Waxaa intaa dheer, natiijooyinku waxay muujinayaan dib-u-habaynta xakamaynta degdega ah iyo awoodda dib ugu soo noqoshada hawlgalka caadiga ah haddii dareemayaasha ay ka soo kabtaan xaaladda khaldan.
Nidaaminta xakamaynta ayaa koontaroolaysa nidaam kasta oo mawjadaha kala badh ah, sida in marxalad kasta oo matoorka ah, koronto ama awood koronto la sii go'aamiyay, ayaa la dabaqayaa ama waxaa lagu dabaqi karaa waqti go'an. Nidaamka go'aaminta xaaladda hawlgalka , ayaa go'aamisa ugu yaraan xaaladda hawlgalka ee nidaamka xakamaynta. Nidaaminta xakamaynta ayaa loo qaabeeyey, si haddii ugu yaraan hal xaalad hawleed oo horay loo sii go'aamiyay ee matoorka ama nidaamka xakamaynta la ogaado, amar ayaa la soo saaray, oo loogu talagalay soo saarista wareeg gaaban oo u dhexeeya dhammaan xidhiidhada korontada. lagu daray habka lagu xakameynayo matoorka koronto ee joogtada ah.
Iyadoo la tixgelinayo khasaaraha naxaasta iyo birta luminta, kontoroolka hufnaanta ee kontoroolka korantada 220v ee guriga ee baabuurta korantada ayaa la darsay si loo hagaajiyo waxtarka mootada ee culeyska fudud. Xakamaynta raadinta ee ku salaysan qaybta dahabiga ah ee algorithm waa la hagaajiyay iyada oo la dhimayo baaxadda raadinta qulqulka rotor. Nidaam tijaabo ah ayaa lagu dhisay iyadoo lagu salaynayo TMS320LF2407 DSP. Algorithm-model-khasaaraha iyo algorithm-ka-xakamaynta algorithm ee ku salaysan habka qaybta dahabiga ah iyo habka qaybta dahabiga ah ee la hagaajiyay ayaa la barbardhigay cilmi-baaris tijaabo ah. Natiijooyinka tijaabada ahi waxay muujinayaan in labada xeeladood ee xakamaynta ay si cajiib ah u wanaajin karaan hufnaanta mootada. Kantaroolaha-qaabka-lumintu wuxuu leeyahay sifooyin wanaagsan oo ah xawaaraha hagaajinta degdega ah iyo qulqulka yar yar iyo isbeddelka qulqulka. Algorithm-ka-koontaroolaha qaybta dahabiga ah ee la hagaajiyay waa mid fudud, waxayna ku gaari kartaa waxtarka sare ee kantaroolaha-qaababka. Xakamaynta goob-raadinta way ka madaxbannaan tahay kala duwanaanshaha cabbirka iyo saxnaanta moodeelka, sidaas awgeedna waxay leedahay rajooyin codsi oo ballaadhan.
Xawliga sare iyo saamiga miisaanka, hufnaanta sare iyo baaxadda xawaaraha ballaaran waa inay ahaadaan tayada ay leeyihiin nidaamyada wadista mootada ee Gawaadhida Korontada. Warqadani waxay ujeedadeedu tahay inay soo bandhigto daraasad is barbardhig ah oo ku saabsan hababka kala duwan ee wadista mootada ee loo isticmaalo Gawaadhida Korontada, iyo in dib loo eego xakamaynta qulqulka iyo teknoolojiyadda sharciyeynta hufnaanta ee loo adeegsado habka lagu gaarayo bartilmaameedyada sare.
Iyada oo la eegayo maalgashiga culus ee dawladaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ee wadamada warshadaha leh ee horumarinta baabuurta korontada ayaa la isku dayay in lagu qiimeeyo ilaa inta uu le'eg yahay dadaalkani, gaar ahaan suuqa Maraykanka. Saamaynta labada nooc ee baabuurta waa la baaraa: Gawaadhida korantada oo gebi ahaanba ku xidhan tamarta ku kaydsan baytariyada, iyo baabuurta isku dhafka ah ee ku qalabaysan matoor koronto iyo matoor yar oo gargaar gudaha ah. Baabuurta korantada waxa ay ku sii jiri doontaa in si taxane ah loo soo saaro kharash ka badan kuwa la barbar dhigo kuwa gubanaya gudaha ilaa wax soo saarka tirada badan lagu caddeeyo iibka sareeyo. Waaxda Tamarta ee Mareykanka barnaamijka muujinta korontada iyo gawaarida isku-dhafka ah waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo in gaariga korontadu uu ka baxo goobadan xun. Haddii barnaamijka bandhigga Waaxda Tamarta ee Maraykanku uu si guul ah ku dhammaado, xaaladda sri waxa ay muujinaysaa kobac gaabis ah balse joogto ah ee suuqa baabuurta korontada.
Xoogagga mustaqbalka tamarta gaadiidka caalamiga ah ayaa isbedelaya, ugu horrayn waxaa sabab u ah shidaalka oo aan la hubin iyo saameynta xun ee ay shiidaalkan u geystaan ​​dadka gaadiidka waddooyinka oo si degdeg ah u koraya. Dadkani waa kuwa ugu badan ee isticmaala tamarta qaybta gaadiidka adduunka oo dhan. Isla markaana, u hoggaansanaanta sharciga la soo bandhigay si loo xaddido qiiqa qiiqa ayaa noqonaysa walaac weyn, taasoo horseedaysa abuurista suuq lagu iibiyo baabuurta aan hawada ka saarneyn. Golaha Tamarta Qaranka ee Koonfur Afrika ee xilligaa ayaa dib u baadhay soo gelinta baabuurta korontada ku shaqeysa ee suuqa gaadiidka. Maqaalkani wuxuu bixiyaa dulmar guud oo ku saabsan xaaladda tamarta gaadiidka caalamiga ah iyo Koonfur Afrika, taasoo muujinaysa dhiirigelinta xiisaha dib u cusboonaysiinta baabuurta korontada iyo faa'iidooyinka ku jira soo bandhigida doorashooyin badan oo gaadiid koronto ah oo loogu talagalay waaxda gaadiidka ee Koonfur Afrika.
Qeybta dhexe ee xogta elektaroonigga ah ee ay isticmaasho hal ama in ka badan oo soo saarayaasha alaabada adag waxay leedahay unug kaydin oo lagu kaydiyo xogta la xidhiidha alaab-qeybiyaha ama kooxaha alaab-qeybiyaha, alaab-qeybiye kasta ama koox-qeybiyaha ayaa leh tixraac elektaroonik ah. Unugga habaynta xogta elegtarooniga ah waxa ay ku xidhan tahay shabakad isgaarsiin waxaana laga heli karaa alaab-qeybiyaha qaybsan cutubyada teerminalka si loogu ogolaado gelitaanka xogta alaab-qeybiyaha iyadoo la adeegsanayo qiimaha tixraaca eletrooniga ah. Sheegasho madax banaan ayaa loo sameeyay habka loogu talagalay 220v matoorka korontada ee guriga iyo maamulka xogta alaab-qeybiyaha ee badeecada adag. Hal-abuurku waxa kale oo uu la xidhiidhaa badeecada kombayutarka u dhiganta.
Matoor koronto, gaar ahaan matoorka masaxa ee lagu wado hagaajinta muraayadda hore ee gaadhiga dhexdiisa, waxa uu leeyahay guryo gear ah oo ay ku jiraan dabool iyo tiro badan oo xidhidhyo fur ah. Xidhiidhada qaar ayaa lagu xidhxidhay guryaha gear-ka, gaar ahaan daboolka, iyo ugu yaraan hal xidhiidh oo kale ayaa ku xidhan birta hadda jirta ee matoorka waxana la dhigaa guri xidhiidhiye ah. Matoor koronto oo 220V ah oo ku jira guriga & sahayda beerta ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika.Si loo ilaaliyo xidhiidhada furka iyo gudaha guriga gear-ka ee wasakhda, guriyaynta xidhiidhiyaha waxa ay leedahay daloolo cidhif wareeg ah leh kaas oo xidhidhka furaha ee lagu xidhay guriyaha marshadu ay galaan guriga xidhiidhiyaha. Intaa waxaa dheer, guryaha isku-xidhaha ayaa si daboolan loogu dabaqayaa guryaha qalabka.
Habka waxa uu ku lug leeyahay isku-xidhka wakhtiyada shaqaynta baabuurka iyo wakhtiga, go'aaminta wakhtiyada ay suurtogal tahay in hababka elegtarooniga ahi shaqaynayo iyo in la bilaabo hababka elegtarooniga ah ee qaabka heeganka ah wakhti ka hor inta aan la bilaabin suurtogalka ah ee baabuurka. Isku xidhka wakhtiyada shaqadu waxay ku xisaabtamayaan wakhtiga maalinta, maalinta todobaadka, ciidaha iyo/ama wakhtiga sanadka.
Nidaamka dib-u-kicinta ee gaadhiga ayaa go'aamiya xaaladda hoos u dhaca iyadoo lagu salaynayo tirada kacaanka matoorka iyo calaamada xawaaraha oo wuxuu sameeyaa bareega dib u soo kicinta iyadoo loo eegayo xaalada hoos u dhaca. Nidaamka bareegga dib-u-dhaqaajinta waxaa ka mid ah dareemayaasha kacaanka ee lagu ogaanayo tirada kacaannada rotor ee mootada wadista baabuurta iyo dareemaha furitaanka xawaaraha ee RAM-ka ayaa kaydiya xogta takoorka ee u dhexeeya habka bareegga dib-u-soo-kabashada iyo habka wadista iyadoo lagu salaynayo tirada Kacaannada rotor-ka iyo furitaanka xawaaraha iyo sidoo kale kaydinta xogta saamiga shaqada-off-ka ee FET-yada ee habka braking regenerative iyo in habka wadista. CPU A waxay soo ceshataa xogta saamiga shaqada ee bannaanka u dhiganta tirada kacaannada rotor-ka iyo xawaaraha furitaanka ee habka braking regenerative marka habka dib-u-dhaqaajinta la go'aamiyo iyadoo lagu salaynayo kacaannada rotor-ka iyo furitaanka xawaaraha.
Korontadu waxay siisaa korantada qalabka korontada ku shaqeeya sida Motherboard-ka oo ku dhex shaqaynaya baabuur. Motherboard-ku waxa uu ku jiri karaa quwad jilicsan oo jilicsan iyo gelinta isha korantada oo raacda habka kor-u-qaadista iyo habka hoos u dhaca. Korontada waxaa ku jiri kara qalab koronto ah oo loogu talagalay isku xirka batteriga gaariga iyo gelinta beddelka loogu talagalay in lagu xiro shidiyaha gaariga. Korontada waxa kale oo laga yaabaa inay ku jirto koronto ku xidhidhiyaha isha korontada ee Motherboard-ka iyo wax-soo-saarka beddelka ee ku xidhidhiyaha tamarta jilicsan ee Motherboard-ka. Beddeliyuhu waxa uu ku xidhan yahay wax-soo-saarka tamarta iyo soo-saarka tamarta si loogu beddelo awoodda wax-soo-saarka DC ee batteriga loona beddelo awoodda wax-soo-saarka DC ee Motherboard-ka. Xakameeyaha wuxuu ku xiran yahay gelinta beddelka iyo wax-soo-saarka beddelka. Kantaroolka waxa loo qorsheeyay in uu Motherboard-ku bilaabo habka korontada marka uu shidmo gaadhiga iyo in uu bilaabo habka hoos u dhigida marka uu shido gaadhigu.
Qalabka korontada ku shaqeeya iyo qalabka gudbinta korontada ee gaadiidka korontada ayaa mid walba loo dhisay qaab dhismeed unug si loo hagaajiyo baaxadda guud iyo isku halaynta gaadiidka korontada. Baabuurka korantada oo ay ku jiraan, sida nidaam koronto, koronto batari ah, matoor, iyo kantaroole lagu xakameynayo wareegtada mootada, unugga korantada wuxuu ka kooban yahay unugyo badan oo kaydin ah oo ka kooban sahay koronto, kiis Unugyada kaydinta, wareegga wadista mootada iyo dabeylaha labaduba waxay ku rakiban yihiin kiiska, substrate saxan ah oo daboolaya unugyada kaydinta, iyo saldhigyada isku xirka terminaalka unugyada kaydinta, wareegga wadista mootada iyo dabeylaha. Matoor koronto oo 220V ah oo ku jira guriga & sahayda beerta ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika. Sidoo kale, gaadhiga korantada oo ay ku jiraan, sida habka wadista, matoorka, xajinta, gudbinta, iyo habka gudbinta awooda, unugga gudbinta korantadu waxa uu ka kooban yahay gudbinta xawliga badan ee tooska ah oo ay ku jirto xajinta eey, iyo xajinta eyda waxay ka kooban tahay qayb xajin ah oo dhaqaaqi karo oo ay ku jiraan magnet joogto ah.
Hal-abuurku waxa uu la xidhiidha mishiin koronto, gaar ahaan matoor-dhaliyaha gaadhiga, kaas oo ka kooban guri iyo dabool dibadda ah kaas oo ku hareeraysan guryaha si isku-duubni ah, kaas oo qeexaya guryaha ku yaal aagga giraanta ah kaas oo si dareere ah loo xiray oo ku xiran qulqulaya iyo qulqulka qaboojiyaha. Hadafka ikhtiraacu waa in la abuuro socodka isku midka ah ee ku wareegsan guryaha si loo hubiyo awoodda qaboojinta ku filan xitaa marka socodka mugga qaboojiyaha uu yar yahay. Natiijo ahaan, xubno badan oo hagaya axially ayaa loo habeeyey qaab aagga giraanta ah in qaboojiyaha lagu qasbo inuu dhex maro aagga giraanta ee band axially ballaaran gudaha qaybaha aagga giraanta kuwaas oo isku xiga midba midka kale jihada durugsan, jihada ka soo horjeeda ee socodka iyada oo loo marayo qaybaha aagga giraanta ku xiga.
Nidaam wareeg ah oo loogu talagalay bixinta matoorada marawaxada, gaar ahaan baabuurta, rotor-ka mishiinka marawaxadu waxa uu ku xidhan yahay caabiyaha eexda iyo iyada oo la marayo isgoysyada beddelka ee transistor-ka ilaa meesha laga soo galo isha korantada. Halbeegga danab ah oo lagu soo saarayo bias resistor iyo parameter u dhigma xawaaraha rotor-ka oo laga soo qaatay qiimaha dabeecadda rotor-ka ayaa lagu daraa waxaana wadarkooda lagu barbar dhigaya cabbirka danabka la hagaajin karo. Kala duwanaanshuhu wuxuu saameeyaa halbeegga waditaanka ee transistor-ka si dadban ama si toos ah.
Hal-abuurku waxa uu la xidhiidha koronto-dhaliyaha loo isticmaalo in baabuurta lagu kaxeeyo si koronto ah oo uu kaxeeyo matoorka gubanaya gudaha kaas oo ku rakiban bistoonada sabbaynaya si xor ah. Matoor koronto oo 220V ah oo ku jira guriga & sahayda beerta ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika.Matoorka gubashada gudaha wuxuu isticmaalaa wareeg laba-stroke ah oo leh asymmetric, koronto la koontaroolo wax soo saarka isku dhafka ah, kaas oo lagu sameeyo marawaxadaha qiiqa-gaaska oo leh koronto dhexe. Awoodda xad-dhaafka ah ee lagu soo saaro awood buuxda ayaa dib loogu celiyaa koronto-dhaliyaha ku jira soo saarista isku dhafka ah. Natiijo ahaan iyo natiijada waxtarka sare ee matoorka gubashada gudaha ee laba-stroke, kaas oo ah naqshad fudud, waxtarka ayaa la gaaraa kaas oo ka sarreeya qalabka wax-soo-saarka korantada ee caadiga ah. Intaa waxaa dheer, koronto-dhaliyaha waxaa lagu kala soocaa mugga jirka oo aad uga yar iyo hoos u dhigidda awoodda miisaanka miisaanka.
Dabaqa labajibbaaran ee isku-dhafan ayaa lagu rakibay si uu ugu dhaqaaqo xagga tarjumaada gudaha iyo agteeda qaybta gaadiidka. Waxay ka samaysan tahay madal qaade hoose oo ku sifaysan dusha sare ee taageerada oo ka kooban marin qaade gaadhi , oo lagu fidiyay dariiqa dhamaadka kaas oo si wada jir ah loogu sifeeyay articulation laablaaban . Jidka ugu dambeeya waxa lagu sifeeyay ilaa dhamaadka masraxa sideyaasha hoose. Dusha sare ee taageerada waxay laalaabtaa kor iyadoo la raacayo laba ramp iyo iyada oo loo marayo articulation laalaabida. Jidka weyn ee qaade gaadhiga , marka la raro, waxa lagu qaadaa iyada oo loo sii marayo dhamaadka bilaashka ah oo u janjeera xaga articulation-ka laalaabida si ay u taageerto gaadhiga kowaad oo ay u banayso, hoostiisa, meel banaan oo loo isticmaalo gaadhiga labaad. Meel siman, dusha sare ee taageerada waxay ka dhigan tahay u dhigma u dhigma dusha sare ee rarida iyo rarida alaabta. ikhtiraacani waa mid ay daneynayaan kuwa dhisa gaadiidleyda ama gawaarida ganacsiga (utility).
Hal-abuurku wuxuu la xidhiidhaa furaha korantada, gaar ahaan isteerinka tiirka isteerinka ee baabuurta. Marka laga hadlayo furahaan, xaashi bir ah oo laga soo shaabadeeyey dahaadhka dabaylaha ayaa lagu dhejiyaa saxan salka iyada oo dahaadh extrusion ah. Xidhiidhka xidhiidhka dhaqaaqa waxa uu la falgalaa qaybo badan oo xidhiidh ah oo ku dhex jira dariiqyada wadista. Mid ka mid ah raad-raaciyaha ayaa leh qayb xiriir oo ku taal meel ka fog saxanka saldhigga, oo qiyaastii barbar socda. Intaa waxaa dheer, habka ayaa la daaha ka qaaday si loo soo saaro shil koronto oo kale. Sida habkan loo eegayo, qaybta xidhiidhka oo ka fogaana saxanka salka ayaa la soo rogmanayaa, iyada oo saxanka saldhigga ah, oo la galay meeshii loogu talagalay, ka dib markii xaashida birta ah ee la daboolay.
Nidaam wareeg ah oo loogu talagalay bixinta korantada si loo xakameeyo qalabka baabuurta, isagoo leh khadka ugu horreeya ee korontada, xariiqda dhulka koowaad, xariiqda korontada labaad iyo xariiqda dhulka labaad, oo lagu garto in xariiqda dhulka koowaad iyo kan labaad ay noqon karaan ku xidhidhiyaha furaha la koontarooli karo, iyo in wareegta macquulka ahi xidho furaha marka xariiqda dhulka ugu horeysa uu xumaado ama go'o.
Qalabka laydhka ah ee loogu talagalay in lagu soo bandhigo gawaarida gawaarida ayaa lagu tilmaamay, kiiska kuleyliyaha ayaa lagu rakibay gudaha guluubka halogen, kaas oo kuleyliyuhu uu ilaalinayo heerkulka gudaha gudaha gudaha nalka gudaha xadka la qeexay xitaa haddii Isticmaalka tamarta ee fiilaha ifaya way kala duwan tahay. Nolosha dheer ee nalka halogen ayaa markaa la hubiyaa xitaa haddii nalka halogen lagu shaqeeyo iftiin yar.
Hal-abuurku waxa uu la xidhiidhaa unug koronto oo leh matoor si elektaroonik ah ku wareego oo leh rotor motor-magnet joogto ah oo leh matoor matoor ah iyo guri matoor , kaas oo marka la isu keeno matoorka wadista dhamaadka usheeda dhexe ee mishiinka rotor-ka ee go'an usheeda dhexe ayaa dunta. Usheeda dhexe ee rotor motor waxaa la sameeyay sida in dhamaadka usheeda dhexe yimaado in ururinta usheeda dhexe rotor motor ee hawlgelinta la godka usheeda dhexe ka hor rotor motor joogto ah-magnet in field magnetic wax ku ool ah stator motor ah.
Hal-abuurku waxa uu la xidhiidha marinka ulo-ulaha, gaar ahaan hab-dhaqanka ulaha ku jira gaadhiga, oo ka kooban buush helid kaas oo la geliyo dalool isku-xidhka qayb ka mid ah oo leh dalool ulaha.Matoor koronto oo 220V ah oo ku jira guriga & sahayda beerta ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika. Buushka helaya wuxuu leeyahay, hal dhinac, curiye horudhac ah oo dheeri ah oo ka soo koraya daloolka shirka ee qaybta qaabka koorta ama dabinka kaas oo dhamaadka ulaha lagu soo bandhigayo lagu soo bandhigi karo furitaanka marinka si tartiib tartiib ah u gelinaya ama dul saaraya qaybta hordhaca kaaliyaha.
Aaladda anteenadu waxay leedahay anteeno leh anteeno koronto ku shaqaynaysa (AF) oo ku dheggan cidhifka hore ee muraayadda hore (FF) oo ay ku lammaansan tahay fiilo ilaa hal terminal ee aqbalaha, cidhifka muraayadda wuxuu u dhaqmayaa sidii oogada dhulka ee HF calaamadaha. Qalabka anteenada waxaa laga yaabaa inuu ogaado goobta korantada (EM) ee ay bixiso gudbiyaha qufulka dhexe (FS) ee bannaanka gaariga (KF).
Xaaladda weelka baabuurta, gaar ahaan baabuurta, sagxada konteenarka iyo gidaarka dhinaca konteenarka waxaa sameeyay qaybaha derbiga, kuwaas oo ku wareegsan niyad-jabka soo dhaweynta, ee cirifka taayirrada. Furitaanka niyad-jabka soo dhaweynta waxaa lagu xiri karaa iyada oo loo marayo dabool kaas oo si buuxda u daboolaya, cidhifyada kuwaas oo u fidsan cirifka cirifka kaas oo ka dhammaanaya kan dambe si uu ula socdo. Daboolka waxaa lagu xiri karaa cirifka iyadoo la adeegsanayo quful. Taayirrada firaaqada ah ayaa si fudud loogu xidhaa baabuurka iyada oo la adeegsanayo qalabka ammaanka lagu xidho, kaas oo ogol kaliya wareejinta, furidda iyo ka saarida taayirka taayirka ka dib marka daboolka laga saaro iyo gudaha niyad jabka soo dhawaynta.
Sanduuqa aamusnaanta qiiqa wuxuu leeyahay dabool gudaha ah kaas oo ku yaal tuubada dhibicda cadaadiska kaas oo daloola derbigeeda. Curiyaha dhalisa vortex-ku wuxuu ku yaalaa dherer aad u dheer oo ah tuubada dhibicda cadaadiska, iyo qayb tuubo oo ku xidhan halka laga soo galo iyo dhinaca ka baxa ee daasadda ayaa u ogolaanaysa in gaaska uu soo galo kana baxo. Curiyaha dhalisa vortex-ku waxa uu yeelan karaa qaabaynta zigzag ama qaabaynta khadka serpentine oo ay weheliso qayb laxaad leh oo dhererkeeda ah. Walxaha dahaadhka ah ayaa buuxiya booska u dhexeeya daaska iyo tuubada dhibicda cadaadiska.
Hal-abuurka hadda wuxuu la xiriiraa aaladda qaboojinta ee ku habboon in lagu isticmaalo gawaarida, oo ka kooban ugu yaraan hal kombaresarada, ugu yaraan hal kombaresarada, ugu yaraan hal wareeg oo cabbir ah, ugu yaraan hal beddele DC/DC kaasoo u adeega sida cod-weyneeye kaasoo kor u qaada korantada accumulator ( V AK). ugu yaraan hal matoor oo lagu shubay kombaresarka, ugu yaraan hal matoor rogaal celiye ah kaas oo uu ku quudiyo korantada oo u beddesha danabka DC una beddelo koronta AC iyo unug kontorool oo fulisa kontoroolka tamarta si loo ilaaliyo cimriga kaydiyaha isla markaana hagaajiya xawaaraha wareegtada mootada markaa. in accumulator-ku aanu dhaawacmin oo tamarta kaydiyaha la isticmaalo wakhtiga ugu dheer.
Qaybta elektaroonigga ah waxay leedahay xiriir dibadeed, kaas oo lagu bixiyo soo saarista xiriirka korantada ee meelo badan oo xiriir ah oo ku yaal korantada dhinaca. Xiriir kale oo dibadda ah ayaa la bixiyaa si loo soo saaro xiriirka koronto ee mid ka mid ah meelaha xiriirka badan ee korantada dhinaca kale ah. Matoor koronto oo 220V ah oo ku jira guriga & sahayda beerta ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika.Labada xiriir ee dibadda ah waxaa lagu sameeyay hal gabal iyo kirishbooye qaabeysan shanlo. Cidhifyada xorta ah ee iliga kirishbooyada birta waxay ku xiran yihiin korantada hore ama kan dambe ee hab koronto ah.
Hal-abuurku wuxuu la xidhiidhaa moduleka gudbinta ee unugga gudbinta mishiinka, ayaa sheegay in moduleka ka kooban yahay usheeda dhexe ee isku xidhka mishiinka kulaylka, shafka wax soo saarka ee isku xidhka sanduuqa gear-ka, iyo xidhidhiyaha isku xidha ayaa yidhi laba ulood. Qaybta hal-abuurku waxa kale oo ay ka kooban tahay: dabool madax-bannaan oo ka kooban qolof-koowaad iyo qolof labaad, ayaa la sheegay in laba qolof oo kala badh ah oo samaysa unug daboolan oo ka kooban xajin kaas oo si dabiici ah ugu jira booska ku hawlan; curiye farsamo oo loogu talagalay ilaalinta xajinta ee booska la sheegay in lagu hawlan yahay iyada oo la adeegsanayo piston qaab disk ah; wareegga kontoroolka hydraulic ee si toos ah ugu dhaqma piston-ka ka soo horjeeda curiyaha farsamada, oo ku yaal booska la gooyey ee la yiraahdo xajin; iyo wareegga hawo-qaadista ee saliidaynta iyo qaboojinta xajinta. Hal-abuurku waxa lagu dabaqi karaa qaybta gudbinta matoorka ee baabuurta.
Baabuurka tamarta ayaa leh koronto iyo mishiinno ku shaqeeya koronto, qalab iyo qalab koronto, halkaas oo baabuurka tamarta uu u samaysan yahay sidii hal-gees ama laba-geesoodka axle oo leh bar-jiididda baabuurta ama baabuur kale oo ku habboon jiidista. Baabuurka tamartu waxa uu leeyahay xidhidh fur u ah bixinta nalalka shaqada ee trailer iyo chassis. Baytariyada waxaa si isbar-bar socda ama taxane ah ugu xiran aaladda hadda jirta.
Muhiimadda baabuurta korontadu leedahay ayaa kor u kacday sannadihii u dambeeyay, taas oo ay ugu wacan tahay saaxiibtinimada deegaanka iyo baahida sii kordheysa ee tamarta nadiifka ah. Awoodda jiidashada ugu weyn ee bixisa dhaqdhaqaaqa baabuurtan waxaa bixiya matoor koronto. Matoorada kale ee korantada ee loo isticmaalo baabuurta korantada, magnet-ka joogtada ah ee burushka aan tooska ahayn ee tooska ah (PMBLDC) ayaa faa'iido badan u leh in loo isticmaalo baabuurta korantada iftiinka sababtoo ah adkeyntiisa, qaab dhismeedka fudud, saamiga qulqulka / mugga weyn iyo waxtarka sare leh. Matoorada PMBLDC waa kuwo la jecel yahay sababtoo ah waxay ka kooban yihiin magnets kuwaas oo saameyn sare ku leh cufnaanta awoodda, hufnaanta, isku halaynta iyo xakamaynta. Alnico, Ferrite (ceramic), SmCo, iyo magnets NdFeB waxay ku jiraan dusha sare/gudaha ama waxay ku dhex jiraan qaab dhismeedka matoorada PMBLDC. Kuwaas waxaa ka mid ah, curiyaha dhulka naadirka ah neodymium, birta, iyo boron (NdFeB) magnets, oo ka kooban curiyeyaasha leh cufnaanta kala duwan, ayaa si weyn loo door bidaa sababtoo ah waxay bixiyaan goob magnet wanaagsan mug kasta.